अभावकाबीचमा जितेको स्वर्ण हो
२०७६ पौष २५ शुक्रबार १०:३५:००
‘अन्तिम समयसम्म पनि साइकलको प्रतीक्षामा थिएँ म । खेलको अघिल्लो दिन पनि साइकल नआउँदा आफ्नै साइकललाई बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएँ ।’ सागको ट्रायथलनकी स्वर्ण विजेता सोनी गुरुङले खेलको अन्तिम अवस्था सम्झिइन् । ट्रायथलनमा देशलाई ऐतिहासिक स्वर्ण दिलाएकी उनले २० किलो मिटरको साइकलिङमा कयौं पटक झस्किनु पर्यो । कारण उनको साइकलको अवस्था ठिक थिएन । सोनीले साइकल मात्र होइन आफूले लगाउने कस्टुममा पनि सम्झौता गर्नुपरेको थियो । ७५० मिटर पौडी । २० किमि साइकलिङ र पाँच किमि डौड स्प्रिन्ट विधामा उनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थियो । सोनीलाई जति सहज पौडी र डौडमा थियो त्योभन्दा कयौं गुणा असहज साइकलिङ भयो । अभावै अभावमा पनि देशलाई स्वर्ण जिताउन पाउँदा उनी धेरै खुसी छन् । सोनीले जितेको स्वर्ण साग इतिहासमै ट्रायथलनतर्फ पहिलो हो । सागमा स्वर्णिम यात्रा र संघर्षको विषयमा सहकर्मी भुपेस उपाध्यायले सोनी गुरुङसँगगरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
साग कस्तो भयो ?
अविस्मरणीय भयो ।
पहिलो सागमानै स्वर्ण जित्दाको अनुभव ?
थोरै खुसी, थोरै निराशा, अनि आँसु पनि निलेको क्षण । आशा गरेभन्दा राम्रो सफलता हात पर्दा रमाइलो लाग्ने रहेछ ।
तयारी धेरै राम्रो थियो । पहिलाका खेलहरूभन्दा सागको तयारी राम्रो थियो ।
आठौं खेलकुद र साग खेल्दा के फरक पाउनुभयो ?
धेरै फरक थियो । सागमा प्रतिस्पर्धा माथिल्लो स्तरको थियो । नेपाली खेलाडी र बाहिरको खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा खेल्ने तरिका नै बेग्लै भयो । आफूलाई जिम्मेवारी र दबाब पनि बेग्लै थियो । मिहिनेत धेरै लाग्यो ।
देशमा च्याम्पियन भएर नै सागमा दबाब भयो ?
पहिलो साग दबाब त हुने नै भयो । अब कस्तो हुनेहो ? एउटा बेग्लै खालको अनुभव हुने रहेछ । सागमा कसरी राम्रो गर्ने मात्र मनमा थियो । आफूलो आफूलाई हौसला दिएर जानु पर्ने । दबाब थियो । प्रतिस्पर्धी पनि बलिया नै हुन्छन् ।
ट्रायथलनमा पहिलो स्वर्ण जित्दाको अनुभव ?
पहिलो पटक देशका लागि केही दिएँ जस्तो महसुस भएको छ । खेल जीवनमा रहेर देशका लागि केही दिने चाहना सफल भयो । सही समयलाई सदुपयोग गर्दा सफलता पनि मिल्यो । ट्रायथलन र देशका लागि अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने हौसला मिलेको छ ।
स्वर्ण जितिसकेपछि पहिले के गर्नु भयो ?
मलाई अच्चम लाग्यो । मभन्दा मेरा साथी र कोचहरू धेरै खुसी थिए । मेरा लागि त्यो क्षण गर्व गर्न लायक थियो । जहाँ मेरा कारणले म भन्दा धेरै देशवासी खुसी थिए । मैले सागमा एक स्वर्ण जित्दा मानिसहरू यति धेरै खुसी हुन्छन् भने त्यो भन्दा ठूलो काम गर्दा कस्तो हुन्छ होला ?
स्वर्ण जितेको जानकारी पहिला कसलाई दिनुभयो ?
परिवारलाई सुनाए । खासै मैले सुनाउन परेन किनकि मेरो बहिनी पनि सोही स्पर्धामा भाग लिएकी थिइन् । पहिला सबैको बधाई पाउँदै ठिक्क थियो । पछि आफैं फोन गरेर घरमा आमा, दिदीहरूलाई सुनाएँ ।
खेल्न जानुभन्दा अघि कस्तो सोच थियो ?
खेल्नुभन्दा पहिले म सधैं उत्साहित हुन्छु । सधैं रमाइ रहेको हुन्छु । आफूलाई हौसला दिन्छु । धेरै खुसीर अत्यास दुवै लाग्दैन । खेल जित्नुअघि कसैले उत्साहित गर्दा सकारात्मकहौसला मिल्छ अनि ममा धेरै ऊर्जा थपिन्छ ।
घरेलु मैदानले के फरक भयो ?
धेरै फरक हुन्छ । बाहिर खेल्दा कुन मान्छेले कसलाई समर्थन गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदैन । नेपाल...नेपाल...मात्र यसको आभास नै बेग्लै ।
स्वर्ण कति विशेष छ ?
एकदमै । एक त मेरो ट्रायथलनमा देशका लागि पहिलो स्वर्ण । त्यसमाथि धेरै अभावकाबीच । ५१ स्वर्णमा एक मेरो पनि । त्यसैले खेल जीवनमा धेरै विशेष छ ।
स्वर्णको शान बचाइ राख्न चुनौती कति छ ?
धेरै छ । दोस्रो भएकी भारतीय खेलाडीले नै चुनौती दिएर गएकी छन्, अर्काे सागमा राम्रो गर्छु भनेर । अब आउने खेलमा धरै राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कुरामा कमी भयो वा मैले गर्न सकिन भन्ने छैन । सबैले मबाट धेरै कुराको आशा गरेका हुन्छन् ।
स्वर्ण जिति सेकेपछि दैनिकी फरक छ ?
पोखरामा खेल खेल्दै गर्दा विदेशी पर्यटकले आफ्नी बहिनी भनेर अरूसँग चिनाउँदा भावविभोर भएँ ।मेरा परिचित हिजो कसरी बोल्थे, आज त्यसमा परिवर्तन आएको छ । बोली, व्यवहार र सम्मानमा धेरै फरक पाएकी छु । मैले गर्दा मेरो परिवार र आफन्तको दैनिकी पनि परिवर्तन भएको छ ।
सँगैका साथीहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?
खेल जीवनका साथीहरूउत्साही छन् । मीठो प्रेरणा दिन्छन् । सुखमा पनि दुखमा पनि । तिमी आफूमा जे गर्छाै राम्रो गर्छाै भन्ने साथीहरूको सदैव हौसला छ ।
अन्य देशका प्रतिस्पर्धी कस्ता थिए ?
उनीहरूको तयारी हाम्रोभन्दा धेरै राम्रो थियो । उनीहरू राम्रो पौडिवाज पनि हुन् । पौडीसँगै साइकलिङ पनि राम्रो थियो । हाम्रो साइकल पुरानो भएकाले केही समय ढिलो भयो भने धेरै समस्या आउँछ भन्ने डर तर उनीहरू त्यो डरबाट मुक्त थिए ।
अन्तिम समयसम्म स्वर्ण जित्छु भन्ने लागेको थियो ?
पौडी सकेर साइकलिङको अन्तिमतिर आउँदा चाहिँ मलाई स्वर्ण जित्छु भन्ने भएको थियो । किन भने उनीहरूभन्दा हाम्रो दौड राम्रो थियो । दौडमा चाहिँ मलै जसरी पनि जित्न सक्छु भन्ने थियो ।
स्वर्णका लागि संघर्ष कति गर्नु भयो ?
धरै संघर्ष गरेकी थिएँ। अन्तिम एक महिनामा मैले कडा तयारी गरेँ । खेल सामग्रीका लागि पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो ।
अभावकाबीचमा पनि स्वर्ण कसरी सम्भव भयो ?
अन्तिम समयसम्म पनि साइकलको प्रतीक्षामा थिएँ । खेलको अघिल्लो दिन हामी चार जना साथी मिलेर पुरानो साइकल बनाउन गयौं । खेलको अघिल्लो दिनसम्म पनि साइकल नआउँदा पक्कै पनि खेलाडीको आत्मबलसहज हुँदैन । चार ओटा साइकल बनाउनु पर्यो । अन्तिम समयसम्म चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि थिएन । साथीहरू मिलेर साइकल बनाउँन थाल्यौं । आफ्नो साइकल कति बेला बिग्रन्छ भन्ने डर थियो । २० किलो मिटर साइकल यात्रामा कयौं पटक साइक बिग्रने डर भयो । विभिन्न अभावकाबीच जितको स्वर्ण हो यो । अभावकैबीचमा यो सफलता हातलाग्छ भने सबै सामग्री हुँदा झन् कति सहज होला ।
नेपालमा तयारीको वातावरण कस्तो छ ?
हामीले दिने प्रदर्शन क्षमता हेर्दा त्यसका लागि यो स्तरको तयारीले पुग्दैन । योभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्न परेमा तयारी पनि त्यही स्तरको गर्नुपर्छ । सागसम्म त यो तयारीले पुग्ला दक्षिण एसियाली बाहेकका देशहरूसँग यो तयारीले पुग्दैन । अहिले पनि राम्रोसँग पौडी खेल्नका लागि ठाउँ छैन । अरू समयमा चिसो पानीमा पौडी खेलौंला तर जाडो महिनामा यत्तिकै बस्नु पर्छ ।
ट्रायथलनमा नेपालको सम्भावना कस्तो छ ?
व्यक्तिगत हिसाबमा हेर्दा राम्रो सम्भावना छ । शारीरिक हिसाबले बलियो भयो भने धेरै सहज छ । योसँगै तयारी र आवश्यक खेल सामग्री भएमा झनै सहज हुन्छ । तयारी स्तरीय भएमा नेपालले ट्रायथलनमा राम्रो फड्को मार्न सक्छ ।
खेलाडी हुनुमा कति गर्व गर्नु हुन्छ ?
हिजोका दिनमा सामान्य लाग्थ्यो । देशका लागि केही दिन सकेको क्षणले उत्साही बनाएको छ । एउटा खेलाडी भएको नाताले साग खेलिसकेपछि भने राम्रो लागिरहेको छ ।
आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुनु हुन्छ ?
गुजारा चलेको छ ।
अबको खेल जीवन कसरी अगाडि लैजाने योजना छ ?
खेल सुरुआत गर्ने समयमा नै जीवन यसैमा व्यथित गर्छु भन्ने लागेको थियो । खेल प्रतिको लगावले सहज बनाएको छ । खेलमय वातावरणले नै यसमा लाग्नेछु । मैले खेलमानै लाग्छु भनेकी छु । यसलाई अन्तिम समयसम्म लिन सहज भने छैन । एक त खेलमानै लागेर जीवन गुजारा गर्न वातावरण पनि नेपालमा छैन । सबै ठाउँ हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
खेलेरै बाच्छु भन्ने वातावरण छ ?
हा..हा.. नढाँटेर भन्नु पर्दा छैन । यो खेलमा रुचि भएको मान्छे मात्र खेल्छ । मलाई पनि खेल जीवनमा गाह्रो काम गर्न मन लागेर यो खेल रोजेकी हुँ । मलाई स्वर्ण जितेर साथै विभागीय टोलीमा भएर केही मात्रामा सहज छ । सबैलाई यो वातावरण छैन । वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने मेरो पनि छैन । खेल नै खेलेर करियर बनाउँछु भन्ने छैन ।
खेल जीवनको सुरुआती क्षण सम्झनुस् न ।
सानैदेखि खेलमा रुचि राख्ने मान्छे हो म । पौडी पनि खेल्थें सानैमा । बढी आएको खोलामा पौडी खेल्थें । मलाई रूख चड्न धेरै मन पथ्र्यो । वरपरका रूखमा चड्ने, डौडने गर्थें । विद्यालयस्तरमा हुने खेलमा पनि धेरै ध्यान दिन्थें ।
सफल खेलाडी हुन के–के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ?
पहिलो कुरा नकरात्मक कुराबाट टाढा हुनुपर्छ । अरूले के दिएन, अरूबाट के पाइएनभन्दा पनि मैले के कुरा दिन सक्छु भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ । मैले अहिले विरोध गरेर पछिल्लो पुस्तालाई सहज भयो भने ठिकै छ । तर, यही अवस्था पछिसम्म चलिरहयो भने चाहिँ बोलेको खेर जान्छ । एउटा खेलाडीले आफूले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । आफूले पहिला कस्तो खालको प्रदर्शन गरेको छु र अहिले त्यो प्रदर्शनलाई विट गर्ने भन्ने हुनपर्छ ।
हारलाई कसरी अत्मसाथ गर्ने ?
मलाई हार्दा खासै नरमाइलो लाग्दैन । किनभने मैले आफ्नो प्रदर्शनलाई राम्रो बनाउन सकिन त्यसैले हारे भन्ने हुन्छ । अघिल्लो प्रदर्शन सहज बनाउँछु भन्ने हुन्छ । राम्रो तयारी गरेको थिएँ भने प्रदर्शन पनि राम्रो हुन्थो होला भन्ने हो । त्यसैले खेलाडीले हारलाई निराशाका रूपमा लिनुभन्दा पनि नयाँ कुरा सिक्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । हाम्रो नेपालको हिसाबमा भन्दा पराजित हुँदा तिमीले अर्काे पटक राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण पनि छैन ।